ट्रम्पको पार्टीका नेताहरुको समर्थन डेमोक्रेटिक उम्मेदवार बाइडेनलाई – khabermala
s ताजा समाचार राजनीति
ट्रम्पको पार्टीका नेताहरुको समर्थन डेमोक्रेटिक उम्मेदवार बाइडेनलाई
Newportalmala ६ भाद्र २०७७, शनिबार २०:०७	No Comments
वासिंटन : अमेरिकामा डेमोक्र्याट पार्टीले जो बाइडेनलाई औपचारिक रुपमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार घोषणा गरेको छ ।
सोमबार सुरु पार्टीको चार दिने मनोनयन अधिवेशनका क्रममा दोस्रो दिन बाइडेनलाई औपचारिक रुपमा उम्मेदवार अनुमोदन गरेको हो । यससँगै ७७ वर्षीय बाइडेन आगामी नोभेम्बरको पहिलो साता हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा वर्तमान राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पसँग प्रतिष्पर्धा गर्नेछन् ।
जारी भर्चुअल अधिवेशनको क्रममा बाइडेनको पक्षमा डेमोक्रेटिक पार्टी वाहेक अन्य राजनीतिज्ञ र विशिष्ठ व्यक्तित्वबाट पनि बाइडेनलाई समर्थन प्राप्त भएको छ । विभिन्न नेता तथा नागरिक अगुवाहरुले उनलाई शुभकामना शुभकामना दिएका छन् ।
रिपब्लिकन नेताहरुबाट पनि समर्थन :
बाइडेनको पक्षमा रिपब्लिकन पार्टीका नेताहरुले समेत शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । अर्थात् ट्रम्पको पार्टीका केही प्रभावशाली र शीर्ष नेताहरुले नै बाइडेनलाई समर्थन दिएका छन् । पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन र विदेशमन्त्री जोन केरी तथा रिपब्लीकन पार्टीबाट पूर्व विदेशमन्त्री कोलिन पावेलले पनि बाइडेनको जितका लागि शुभकामना दिएका छन् । साथै पूर्व राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरले समेत बाइडेनलाई शुभकामना दिए ।
बीबीसीका अनुसार ओहायो राज्यका गभर्नर जोन कासिचले सोमवार डेमोक्र्याटिक उम्मेदवार बाइडेनलाई सघाउने घोषणा गरेका छन्। तर ट्रम्पले आफ्नो समर्थन नगर्ने रिपब्लिकन नेताहरूको कडा आलोचना गरेका छन् । रिपब्लिकन पार्टीका नेताहरुसँगै पूर्व सेनाप्रमुख पावलले बाइडनको प्रशंसा गर्दै उनलाई सघाउने बताए ।
तर पावलले ट्रम्पलाई झुट नेताको रुपमा चित्रित गर्दै उनको कडा आलोचना गरेका थिए । बाइडेनले आफ्नो उपराष्ट्रपति पदका लागि कमला डी ह्यारिसलाई उम्मेदवार बनाएका छन् ।
Previous Previous post: मेक्सिको पर्खाल बनाउन पैसा उठाउने ट्रम्पका पूर्वसल्लाहकार ठगी धन्धामा पक्राउ
Next Next post: Nationwide Covid-19 count crosses 31k with 634 new cases recorded Saturday
Constitution’s vision and values: Are they implemented in letter and spirit?
काठमाडौंमा कोरोना बढ्दो : एकै दिन दुई हजार २० कोरोना संक्रमित थपिए
उद्योग वाणिज्य महासंघको महाधिवेशन अब मंसिर ११ र १२ गते हुने
संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठ न्यायाधीश गिन्सबर्गको निधन
Newportalmala on Nepal: Coronavirus and the media
Newportalmala on एमसीसी परियोजना असार १६ देखि लागू गर्ने सरकारको तयारी
Constitution’s vision and values: Are they implemented in letter and spirit? ६ भाद्र २०७७, शनिबार २०:०७
काठमाडौंमा कोरोना बढ्दो : एकै दिन दुई हजार २० कोरोना संक्रमित थपिए ६ भाद्र २०७७, शनिबार २०:०७
उद्योग वाणिज्य महासंघको महाधिवेशन अब मंसिर ११ र १२ गते हुने ६ भाद्र २०७७, शनिबार २०:०७
संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा ६ भाद्र २०७७, शनिबार २०:०७
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठ न्यायाधीश गिन्सबर्गको निधन ६ भाद्र २०७७, शनिबार २०:०७
Why is Singapore’s COVID-19 death rate the world’s lowest ६ भाद्र २०७७, शनिबार २०:०७